Oovimba beeNgcaciso zeNgcinga yoRhwebo-Funda ukuRhweba
tag: Umbono woRhwebo
I-USD / i-CAD yajikela kwicala elisezantsi!
Ukuhlaziywa: 5 Agasti 2021
I-USD / i-CAD ithengisa ngokubomvu kwitshathi ye-H4 kwi-1.1516. Ihlile njengoko i-Index yeDola yehle isezantsi ukusuka kuma-92.35 aphezulu namhlanje. Ukwehla okungaphezulu kwe-DXY emva kokukhutshwa kwedatha yase-US kungazisa ngakumbi kwi-USD / CAD.
Ngokobuchwephesha, i-USD / i-CAD kusalindeleke ukuba yehle ngaphandle kokuphindaphinda okwangoku. Ixabiso libuyele phezulu ukuphinda lixhase inkxaso yejelo eliphezulu, umgca wangaphambi kokuba uyeke nzulu. Kuhleli ukubona ukuba izakuphendula njani emva kokukhutshwa kwamabango e-US yokungasebenzi.
Isalathi sezoqoqosho kulindeleke ukuba sehle ukusuka kwi-400K ukuya kwi-382K kwiveki ephelileyo. Okubi kunamanani alindelweyo kunokuyenza buthathaka i-USD.
Uhlalutyo lwe-USD / CAD yoBugcisa!
I-USD / i-CAD ibhalise kuphela uqhawulo lobuxoki ngokwahlukana okukhulu ngaphezulu kwenqanaba lokubuyiselwa kwe-38.2% nangaphaya komgca wokunyuka. Ime kwinqanaba le-1.2505 ngexesha lokubhalwa ngezantsi kwenqanaba le-23.6% (1.2513).
Ukwahlulwa komgca omncinci wokuphinda kubonakalise ukwehla okunokubakho. Ukulahla kunye nokuzinzisa ngezantsi kwe-1.2498 yeepivot point kungabonisa ukwehla okubanzi.
I-USD / CAD's rebound yayilindelwe emva kokuthengiswa kwayo. Ibuyile izama ukuphinda ujonge umgca ophakamileyo ngaphambi kokuwa kwakhona. Uxinzelelo lokuthengisa luphezulu okoko luhlala phantsi komgca we-pitchfork ephezulu (UML).
tags Uhlalutyo Technical, Umbono woRhwebo, ukuseta urhwebo, USD / CAD, USDCAD
NZD / USD Ukuqhubeka kwePateni yokuSebenza!
Ukuhlaziywa: 3 Agasti 2021
I-NZD / i-USD ithengisa eluhlaza kwi-0.7012 ngeli xesha lokubhala. Yehlile kancinci namhlanje kodwa iinkunzi zeenkomo zisomelele njengoko i-DXY inyanzelekile. Esi sibini singabhalisa iintshukumo ezibukhali phakathi evekini njengoko i-US izakukhupha idatha eneempembelelo eziphezulu.
Ngokobuchwephesha, isenzo sentengo sibonakalise ukuba intshukumo esezantsi iphelile kwaye i-NZD / i-USD inokukhulisa ukujiya okuphezulu ngaphezulu. Ii-odolo zasefektri zaseMelika zingazisa ubomi kwesi sibini kamva namhlanje. Okubi kakhulu kunokuba kulindelwe amanani anokuphakamisa i-NZD / USD.
Uhlalutyo lobuchwephesha lwe-NZD / USD!
I-NZD / i-USD ibuyisele kwakhona umgca we-50% weFibonacci kwaye ngoku izama ukuqhubeka nokukhula kwayo. Njengoko ubona kwitshathi ye-H4, isibini siphinde sazama umgca ophukileyo we-downtrend ukuzama ukuqinisekisa ukuphuma.
Ukuzinza ngaphezulu kwenqanaba le-0.7 yengqondo kunye nokwenza indawo ephezulu ephezulu kunokubonisa ukukhula ngakumbi. I-R1 (0.7026) ibonwa njengokuchasana okungagungqiyo, kodwa ndiyakholelwa ngokwenene ukuba ukuvala ngaphezulu kwe-0.7009 kunokubangela ukuphuma okuphezulu nge-R1 ngokunjalo.
Ukuvala kunye nokuzinzisa ngaphezulu kwe-0.7009 kunokubonisa ukukhula okungaphambili. Inqanaba lokubuya kwakhona le-50% libonwa njengeyona nto kujolise kuyo.
tags NZDUSD, Uhlalutyo Technical, Umbono woRhwebo, ukuseta urhwebo
I-GBP / i-USD iqala kwakhona ukuHamba kwayo okuPhezulu!
Ukuhlaziywa: 26 Julayi 2021
I-GBP / i-USD inyusa ngamandla namhlanje njengoko i-DXY yehla. Esi sibini sinciphile kancinci kwixesha elifutshane, kodwa kuphela ukuzama amanqanaba enkxaso kwangoko. Ukwenza ukuphakama okuphezulu okuphezulu kunokubhengeza ukukhula ngakumbi.
Isalathiso sokuThengiswa kweKhaya eNtsha sase-US siza kukhutshwa namhlanje kwaye kulindeleke ukuba siphakame nge-800K xa sithelekiswa ne-769K kwixesha langaphambili lokufunda. Kwakhona, ngomso, ukuzithemba kwabathengi be-CB kunokuzisa isenzo esiphakamileyo kwesi sibini. Olunye ulwazi oluhlwempuzekileyo lwase-US ngaphambi kwe-FOMC lunokukhokelela ekubuyiseleni umva kumanqanaba asezantsi.
I-GBP / i-USD H4 Itshati yoHlahlelo lobuGcisa!
I-GBP / i-USD ikwazile ukuzinzisa ngaphezulu komgca ophakathi we-pitchfork (ML). Ukuphakama okuphezulu okuphezulu kunokubonisa ukuqhubeka ngokujonga phezulu. Ngoku ucinezela inqanaba lama-61.8%, i-1.3787, kunye nomgca wecala elisezantsi elilinganayo.
Ukuvala ngaphezulu kwale miqobo iphambili kunokusinika ithuba elihle lokuthenga. I-GBP / i-USD ibhalise ukuphuma okukhohlakeleyo ngokusebenzisa umgca omncinci we-downtrend obhengeza abathengi abomeleleyo.
Ukubhalisa okutsha okutsha kunokuvula intshukumo eyomeleleyo yokujonga ixesha elifutshane. Eyona njongo iphambili ilandelayo ibonakala kumgca onyukayo womphambili we-pitchfork (UML).
tags GBPUSD, Umbono woRhwebo, ukuseta urhwebo
I-GBP / USD yokuQhawuka okuPhambili!
I-GBP / i-USD ihlanganisiwe kwaye ngoku ime kwinqanaba le-1.3870 ephezulu xa kuthelekiswa ne-1.3813 yanamhlanje esezantsi. Iye yanda kakhulu njengenqanaba le-1.3898 kodwa yehle isezantsi njengoko i-US Dollar Index inyuke kwakhona.
Iphawundi inyuke ngaphezulu nokuba iqondo lokungaqeshwa lenyuke laya kwi-4.8% ukusuka kwi-4.7%. Utshintsho lweBango leBango lase-UK kunye ne-avareji yokufumana umvuzo zichaze ngcono kunedatha ekulindelweyo.
I-US iza kukhupha amaBango okungaSebenzi ekulindeleke ukuba ehle ukusuka kwi-373K ukuya kwi-350K, ngelixa iMveliso yoShishino inokubhalisa ukukhula kwe-0.6%.
Uhlalutyo lobuchwephesha lwe-GBP / USD H4!
I-GBP / i-USD ifumene inkxaso kwi-Falling Wedge's resistance kwakhona kwaye ngoku izama ukuxhuma phezulu. I-bias iyakhula ngokude ihlale ngaphezulu komgca we-sliding ongaphandle (SL).
Ukuhlala ngaphakathi komzimba wefolokhwe enyukayo kunye nokuvala ngaphezulu kwenqanaba lokubuyisa le-61.8% kunokubonisa ukukhula ngakumbi. Ukubaleka kwiimpawu zetshathi ezinokuthi sibe nentshukumo ephezulu.
I-GBP / i-USD inokukhulisa ukukhula okubalulekileyo ukuba iyaxhuma kwaye izinzile ngaphezulu kwenqanaba lokubuyisela kwakhona i-61.8%, ngaphezulu kwe-1.3898 ephezulu namhlanje.
tags Forex, IGBP / USD, GBPUSD, Uhlalutyo Technical, Umbono woRhwebo, ukuseta urhwebo
I-GBP / JPY ijonge ukuRhweba ePhakamileyo!
Ukuhlaziywa: 5 Julayi 2021
I-GBP / JPY itshintshe kancinci kwixesha elifutshane emva kokudlula ngaphezulu kwezithintelo ezingaphezulu. Yehlile kancinci ukuphinda ubuye umgca owaphukileyo we-downtrend kwaye ingaqala ukwanda kwakhona kungekudala. Ihamba ecaleni kwixesha elifutshane kodwa ndiyathemba ukuba siza kuba nethuba elihle lokurhweba emva kokuphelisa uluhlu lwalo.
Iponti inokuphinda ikhokele kwaye iphinde iqhube i-GBP / JPY ephezulu emva kokuba i-UK Final Services PMI inyuke ukusuka kuma-61.7 ukuya kuma-62.4 amanqaku, ibetha uqikelelo lwe-61.7.
I-GBP / JPY H1 Itshathi yohlalutyo lobuGcisa!
I-GBP / JPY izama kwakhona umgca owaphukileyo we-downtrend. Ukuhlala ngaphezulu kwayo nokwenza ukuphakama okuphezulu kunokubonisa intshukumo ephezulu. Okwangoku, kwixeshana elifutshane, iYen inokuba yomelele ukuba i-Nikkei (JP225) iyaqhubeka nokuhla.
Asinakho ukubekela ecaleni ukwehla okwethutyana kwinqanaba leepivot point (153.43). Kwelinye icala, ukusilela ukusondela kunye nokuzama kwakhona inqaku le-pivot kunokubonisa abathengi abomeleleyo kunye ne-rally enokubakho.
Iphinde yaphuncuka kumzimba wefolokhwe owehlayo obonisa umlenze ophakamileyo emva kokusilela ukufikelela kunye nokufikelela kumgca ophakathi (ML). Umgca we-150% weFibonacci kunye nomgca wesilumkiso (WL1) unokusetyenziselwa ukujolisa phezulu.
Ukutsiba kunye nokuzinzisa ngaphezulu kwe-153.74 ephezulu kunokwenza ukuba ujingi omtsha uphakame ngenqaku lokuqala elinokubakho elingaphantsi kwe-R1 yeveki (154.25).
tags IGBP, GBPJPY, i-JPY, Uhlalutyo Technical, Umbono woRhwebo, ukuseta urhwebo
USD / CHF Ukuqhubeka kwePateni ukuze kuqinisekiswe!
Ukuhlaziywa: 25 Juni 2021
I-USD / CHF yehla ngoku njengoko i-DXY ithengisa ebomvu. Ukanti, ukuhla kunokuba yinto yethutyana. Intshukumo yamaxabiso iphuhlise imeko yokuqhubeka okuphezulu. Ireyithi ibalekile kule patheni, kodwa sisafuna isiqinisekiso ngaphambi kokuhamba ixesha elide.
I-USD inokuphinda ikhokele kwakhona ukuba amanani ezoqoqosho e-US ahambelana noko kulindelweyo. Isivakalisi esiHlaziyiweyo soThengi se-UoM, iNgeniso yobuNtu, kunye nokuSebenzisa ubuGcisa kunokunyusa isibini.
USD / CHF H4 Uhlalutyo lobuGcisa!
I-USD / CHF iye yehla isezantsi emva kokusilela ukudlula ngaphezulu kwenqanaba lokubuyiselwa kwe-50%. Ukungaphumeleli ukuphinda uzame kwakhona ukuphazamiseka okwaphukileyo kunokubonisa isantya esitsha.
Ngokobuchwephesha, inokuhamba ecaleni kwixesha elifutshane ngaphambi kokuphuhlisa i-swing entsha ngaphezulu. Ukukhula okunokubakho okunamandla kunokwenziwa kusebenze ngokuvalwa okunyusiweyo ngaphezulu kwenqanaba lokubuyisa elingama-50%.
Ukuhlala ngaphezulu kwe-0.9166 yanamhlanje isezantsi kwaye wenze ukuphakama okutsha okuphezulu, ukuvala ngaphezulu kwe-0.9200 kunokuqinisekisa ukuqhubeka okungaphezulu!
tags Umbono woRhwebo, ukuseta urhwebo, USDCHF
I-CAD / JPY idibanisa phambili kokuPhumla!
Ukuhlaziywa: 24 Juni 2021
I-CAD / JPY itshintshe kancinci kwixesha elifutshane njengoko abathengi bephelile. Umkhethe uyanyanzeliswa, ke isibini sinokuphinda siqhubeke nokukhula ngokukhawuleza. Ibhajwe ngaphakathi kwipatheni yokuqhubeka encinci, ukuphuma okuqinisekileyo kolu lwakhiwo kunokubonisa ukuqhubeka okungaphezulu.
Esi sibini siye sehla emva kokubi kakhulu kunokuba bekulindelwe idatha yokuthengisa yaseCanada. Isalathi seNtengiso sithengisiwe nge-5.7% xa kuthelekiswa no-5.1% obekulindelekile, ngelixa ukuthengisa okuThengisiweyo kwehle nge-7.2% ngaphezulu xa kuthelekiswa noqikelelo lwe-4.4%.
I-CAD / JPY H1 Itshathi yohlalutyo lobuGcisa!
I-CAD / JPY yehlile kancinci kodwa ayiphumelelanga ukuphinda iphinde ifumane i-R1 (89.956). Iphuhlise ipatheni encinci yokuqhubeka kwitshathi ye-H1. Ukwenza uqhekeko olusecaleni kunye nokudlula ngaphezulu komgca wokudakumba kungabonisa ukukhula okunokubakho.
Ukudityaniswa okuncinci kwakulindelwe kwaye kuyindalo emva kwendibano emangalisayo. I-CAD / JPY izama ukuqokelela amandla ngakumbi ngaphambi kokutsiba ngaphezulu.
Imbonakalo iyakhula okoko ihlala ihleli ngaphezulu kwe-R1 nangaphezulu komgca ophakathi (ML). Ukuthatha amanqanaba oxhathiso kwangoko kungasizisela ithuba elitsha.
tags Cad, cadjpy, i-JPY, Umbono woRhwebo
I-USD / CHF iRetreat enkulu?
Ukuhlaziywa: 23 Juni 2021
I-USD / CHF ithengisa kubomvu kwitshathi ye-H4 kwaye inokuhla ngokunzulu ukuba idatha yase-US iyakuphoxeka kamva namhlanje. Isibini siyehla njengoko i-DXY iphinde yaqala ukwehla okwethutyana. Isalathiso sedola yaseMelika sihamba phantsi kwisitayile esisezantsi.
I-US iza kukhupha i-Flash yokuThengisa i-PMI kunye ne-Flash Services PMI kamva. Kungcono kunokuba idatha ebilindelwe ingasizisela amandla okunyuka kwi-USD / CHF. Kuya kufuneka ulumke ujikeleze olu shicilelo kuba imeko yokungazinzi iya kuba phezulu.
Olunye ulwazi oluhlwempuzekileyo lwase-US lunokunyanzela isibini ukuba siye ezantsi lows. Ngokwam, ndiyathemba ukuba siza kuba nethuba elihle kamva namhlanje.
I-USD / CHF H4 Itshathi yohlalutyo lobuGcisa!
I-USD / CHF yehlulekile ukuzinzisa ngaphezulu kwenqanaba lokubuyiselwa kwe-50% ebonisa uxinzelelo lokuthengisa. Ukuhla komgca weporkfork (ml) umgca ubonwa njengenkxaso enamandla. Ukuwisa kunye nokuzinzisa apha ngezantsi kunokubonisa ukwehla okunzulu.
Ndizobe ukubuyisela indawo kweFibonacci kwi-swing yokugqibela ephezulu. Ukwaphuka okusebenzayo okungaphantsi kwe-23.6% kunokubangela ukwehla okungaphezulu. Isimo esisezantsi sinokungavunyelwa yimpukane ekwi-bullish ngaphezulu kwenqanaba lokubuyisela le-50%.
I-USD / CHF yangoku yokubuyela kwindalo ngokwendalo emva kwentshukumo yokugqibela ephezulu. Ukuwisa kunye nokuvala phantsi kwe-0.9165 kunokubonisa ukwehla okubanzi.
tags Umbono woRhwebo, USD / CHF, USDCHF
I-EUR / i-USD yentloko eguqulweyo kunye namahlombe!
Ukuhlaziywa: 22 Juni 2021
I-EUR / USD inyukile ngeyure yokugqibela kwaye ngoku kuthengiswa ngayo kwinqanaba le-1.1905 ngaphezulu xa kuthelekiswa ne-1.1881 esezantsi namhlanje. Ngokumangalisayo okanye hayi, i-USD iye yehla nokuba i-US esele ikho yokuThengisa isiKhombisi ixele ingxelo engcono kunokuba bekulindelwe.
Imbonakalo ihlala i-bearish kwithuba elifutshane, kodwa i-EUR / USD inokukhulisa isaphulelo esomeleleyo ngaphambi kokuwa kwakhona. Ingcono kunokuba bekulindelwe idatha yommandla we-Euro exelwe ngomso kwaye amanani amabi ase-US anokunyusa i-EUR / USD.
Uhlalutyo lobuGcisa lwe-EUR / USD H4
I-EUR / USD izama ukubuyela kwinqanaba lama-61.8% elibuyisela umqobo wokuqala. Ukutsiba kunye nokuzinzisa ngaphezulu kunokubhengeza ukukhula okunokubakho kwinqanaba le-1.2 yengqondo.
Kwelinye icala, ukuhlala phantsi kwenqanaba lama-61.8% kunokubonisa amandla e-bearish ukuya kwi-1.1856 yangaphambili ephantsi.
Ukubhabha okunyusayo ngaphezulu kwe-61.8% kunye nokuphakama okuphezulu kunokubonisa ukuzuza okungaphezulu kwixesha elifutshane.
tags EURUSD, Uhlalutyo Technical, Umbono woRhwebo
I-EUR / USD yabuya umva!
I-EUR / USD ibonakala igqithisile kakhulu ukuba iphinde iqhubeke nokwehla kwayo, ngenxa yoko sinokuba nesaphulelo sexeshana. I-DXY ibonakala igqithisile emva kokufikelela kwinqanaba le-61.8%. Ngokobuchwephesha, esi sibini siphuhlise umqondiso onokubakho wokukhuthaza, kodwa sisafuna isiqinisekiso.
Ngokobuchwephesha, isaphulelo semvelo emva kokuwa okukhulu kokugqibela. Iakhawunti yangoku ye-Euro-zone kunye ne-PPI yaseJamani zingene ngcono kunokuba bekulindelwe ngaphambili zixhasa i-Euro.
Uhlalutyo lobuGcisa lwe-EUR / USD H4!
I-EUR / USD yehle kakhulu njenge-1.1885 namhlanje apho ifumene inkxaso. Ukwaphuka kwayo ngokuhlukana okukhulu ngaphantsi kwe-S3 (1.1888) kubonakalise ukubuyela kwakhona. Ngoku kucinezelwa inqanaba lokuphinda ubuyiselwe elingu-61.8% elimele ukunganyangeki.
Ukutsiba kunye nokuzinzisa ngaphezulu kweli nqanaba kulandelwa ukuphakama okuphezulu kunokubonisa ukukhula okwethutyana.
I-EUR / i-USD iphinde yabuya kodwa ibekwe phantsi komqobo we-61.8%. Ukugqitha ngaphezulu kweli nqanaba kunokuzisa inzuzo eninzi.
tags YeEUR / USD, EURUSD, Umbono woRhwebo, ukuseta urhwebo
← Entsha izithuba1 2 3 abaDala izithuba →